Ihe omuma ohuru nke gam akporo 11 nke di ugbua | Gam akporosis
Android 11 dị ebe a na akụkọ 11 kachasị
Manuel Ramirez | | Noticias, Gam akporo nsụgharị
Android 11 dị ebe a mgbe ọnwa ndị ahụ gachara yana nyocha ndị nrụpụta nakwa na ha anọwo na-egosi anyị ụfọdụ akụkọ ha kachasị mkpa. Anyị ga-eme nchịkọta nke ihe ọ ga - ewe ịnwe gam akporo 11 dị ka ntọala maka nhazi ọdịnala ma ọ bụ maka ndị nwere Pixel.
Maka ya Google chịkọtara akụkọ 11 na ihe e ji mara maka ụdị ọhụrụ a nke gam akporo na nke ahụ ga-abịarute ụbọchị ndị a yana ọnwa ndị na-abịanụ maka ọtụtụ ekwentị ndị ọzọ. Gaa maka ya.
1 Ihe ọhụrụ 11 nke gam akporo 11
1.1 The chats ebe ha mkpa na ngosi panel
1.2 Sere n'elu chat egosipụta
1.3 N'ikpeazụ: ihuenyo na-edekọ ihe na android 11
1.4 Njikwa ka mma maka akụrụngwa ụlọ
1.5 Njikwa ka mma maka mgbasa ozi
1.6 Gam akporo Auto maka onye ọ bụla (ọ bụrụhaala na ụgbọala gị dakọtara)
1.7 Nchịkwa granular karịrị ikike
1.8 Tọgharia ikikere maka ngwa ndị anyị na-ejighi
1.9 Nwelite modul nke usoro Google Play
1.10 Gam akporo Enterprise
1.11 Maka ndị nwe Pixel 2 na elu
Ihe ọhụrụ 11 nke gam akporo 11
Site na ụka ahụ dabere na ọnụọgụ ma hapụ aha ndị ahụ dị ụtọ, gam akporo 11 na-abịa ọtụtụ ọchịchọ ịnye ahụmịhe ka mma na nkọwa ụfọdụ nke ahụ ga - azọpụta anyị itinye ngwa ndị ọzọ.
The chats ebe ha mkpa na ngosi panel
Nke mbu n’ime akwukwo ohuru a bu ohere nke ọ gha ewere dika nke ya na mkparita uka ndia nile na nkata anyị nwere na ọtụtụ ngwa dị adị taa maka ebumnuche ndị a.
Ọbụna na oghere a na ngosi panel anyị ga-enwe ike Hazie akparịta ụka ndị ahụ nke anyị nwere mmasị na mgbe niile ịnwe n'ihu ihu. Nke ahụ bụ, mkparịta ụka dị anyị mkpa ga-ebu ụzọ nọrọ ebe ahụ.
Sere n'elu chat egosipụta
Ndị ahụ ama sere n'elu facebook ozi egosipụta ugbu a, ha bụ ụzọ maka ngwa nkata ọ bụla ọzọ anyị nwere na gam akporo 11. Ya bụ, anyị nwere ike ịlaghachi ma gaa mkparịta ụka nkata na afụ nke ga-anọgide na-ese n'elu mmiri dị ka ozi.
Ee, anyị bụ inwe otu animated nkata site na otu nke anyị mmasị ngwa, anyị nwere ike ịlaghachi na ya na-enweghị imeghe isi ngwa. Yabụ ịmaliteghachi ọrụ iji weghara ọrụ kachasị ya na sistemụ dịka gam akporo; Echefukwana a Chineke mode nke Samsung mgbako maka multitasking.
N'ikpeazụ: ihuenyo na-edekọ ihe na android 11
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ndị obodo gam akporo mere bụ enweghị ndekọ ederede arụnyere na sistemụ. Anyị mechara nwee ya ebe a nwee ike ijide ma kesaa ihe na-eme na ihuenyo ahụ.
Ị nwere ike jiri igwe okwu, ngwaọrụ, ma ọ bụ ha abụọ dekọọ ya na-enweghị mkpa ịwụnye ngwa nke atọ; n'agbanyeghị, anyị nwere ike ikwu ndị a ngwa ọdịnala ka ịdekọ ihuenyo Ọ bụrụ n'ịhọrọghị ịnwe Android 11.
Njikwa ka mma maka akụrụngwa ụlọ
Anyị nwere oge ọ bụla ihe ejikọrọ na ngwaọrụ n'ụlọ na gam akporo 11 biara inye ihe omuma a. Na gam akporo 11 anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ smart niile ejikọrọ na otu ebe.
Na-eme ka a ogologo pịa na bọtịnụ ike anyị ga-aga na-achịkwa thermostat, ma ọ bụ na usoro nke smart bulbs na anyị odude ke ufọk.
Njikwa ka mma maka mgbasa ozi
Google na-eso redesigning ihe niile metụtara na multimedia playback Na oge a ka ha kwusiri ike mgbanwe dị n'etiti ngwaọrụ dị iche iche na-emepụtaghachi egwu anyị, vidiyo ma ọ bụ onyonyo.
Na ndị ọzọ okwu, anyị nwere ike na-aga site na-ege ntị anyị mmasị song na Spotify site anyị ekweisi, ka wepu ha ma kpọọ ozugbo na ndị na-ekwu okwu Bluetooth na anyị ejikọrọ.
Gam akporo Auto maka onye ọ bụla (ọ bụrụhaala na ụgbọala gị dakọtara)
Mgbe dabere na ndị na-emepụta ụgbọ gị na afọ Iji kwado Android Auto, ọ bụrụhaala na ị nwere ya, gam akporo 11 ga-agba gam akporo Auto enweghị nsogbu ọ bụla. Ekwentị niile nwere ụdị ọhụụ a ga-enwe ike iji ya.
Nchịkwa granular karịrị ikike
Ọ na-etinye na ngwoolu na nchedo nke ndị a nke nwere ike ibuso mwakpo nzuzo anyị dị ka igwe okwu ma ọ bụ igwefoto. Ọ bụrụ na anyị nwere arịrịọ maka ikikere iji ihe ndị ahụ, ugbu a, mgbe achọrọ iji ha ọzọ, a ga-arịọ ikike onye ọrụ ọzọ.
Tọgharia ikikere maka ngwa ndị anyị na-ejighi
Gam akporo 11 ga tọgharịa ikikere nke ngwa ndị ahụ na anyị anaghị ejikarị igbochi ịnweta data anyị. Oge anyị jiri ngwa ahụ ọzọ, Android 11 ga-arịọ anyị ka anyị nye ya ikike maka multimedia, igwe okwu, wdg.
Nwelite modul nke usoro Google Play
Ebumnuche Google bụ jiri Google Play iji melite usoro site na modulu. Yabụ, mmelite nche na nzuzo ga-eme site na ụzọ ahụ.
Ya mere anyị ga-ahụ mmelite sistemụ gam akporo na-enweghị na-eche maka isi usoro update. Ihe ohuru iji lebara ya anya n'ihi ike o nwere ike inye gam akporo.
Gam akporo Enterprise
More na ndị ọzọ anyị na-ahụ ozi ndị ọzọ metụtara «Enterprise» na na jikọrọ ọkachamara ojiji na e nyere a mobile na gam akporo. O nwere ihe jikọrọ ya na gam akporo 11 inweta ihe nzuzo na nchekwa nke ị nwere na ngwaọrụ maka iji ọkachamara.
Un profaịlụ ọrụ nke na-enye ngalaba IT ngwaọrụ iji rụọ ọrụ ngwaọrụ dị na ntanetị n'enweghị nsogbu na data onwe gị ma ọ bụ ọrụ ị nwere na ekwentị.
Maka ndị nwe Pixel 2 na elu
A ga-anabata ozi maka hazie ma jikwaa ekwentị gị dị ka ngwa ngwa N’ụlọ n’ụlọ dị ka ihe ndị anyị na-eme kwa ụbọchị nke anyị na-eme kwa ụbọchị.
Ma otu a ka Ihe ohuru ohuru nke gam akporo 11 nke amalitela ịbịaru ọtụtụ awa na ụfọdụ Pixel, OnePlus, Xioami, OPPO na realme. Ugbu a iji chọpụta ahụmịhe ọhụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 11 dị ebe a na akụkọ 11 kachasị
Ngwa Podcast nke Google na-agbakwunye bọtịnụ Nkedo na ihe omume anyị na-egwu
Redmi 9i enweela ụbọchị mbido ma ọ bụ ekwentị na - esote nke dị ọnụ ala